Warkii Radio Xoriyo : 05 Aug,2003
-Shir ay Yeesheen Ururka Haweenka Ogaadeenya ee Australia
-Warbixin sanadeed kii Malese aad loo dhaliilay
-UNDP oo sheegtay in Itoobiya kamid tahay wadamada ugu horumarka yar aduunka.
-Shir qarsoodi ah oo ay yeesheen Jeneraalada Ciidanka Itoobiya iyo qaar kamid xubnaha EPRDF
-Dalka Koonfur Africa oo Noqon Doona Hogaanka Ciidamada Nabad Ilaalinta Afrika,Somalia
-Wasiiro Tatirsan DKMG oo Kulaabtay Somalia
Warkii oo Fidsan
Haweenka Ogaadeenya ee Australia oo Shir Yeeshay
War Rasmi ah oo aanu ka soo Xiganay Wakaalada Wararka Ogaadeenya ONA,ayaa Sheegaya in ay 03 Aug,2003 Shir isugu yimaadeen Ururka Haweenka Ogaadeenya Magaalada Melbourne ee Wadanka Australia. Shirkaa Haweenka Ogadeniya yeesheen waxaa Warbixin Dheer ugu soo jeediyay khadka Telfoonka Gud.Hogaanka Warfaafinta Jwxo,Halgame Abdiqadir Sheikh Xasan Biixi Hirmooge,taas oo qiiro weyn galisay dhamaan Xubnihii Warbixintaas dhagaysanayey. Kadib makrii uu Hogaanku ka haqab tiray Xaalada Guud iyo Mida Gaar ahaaneed ee uu Halganku ku sugan yahay waxay dhankooda ka waydiiyeen su,aalo ay u baahnaayeen in loo bayaamiyo iyadoo ugu danbayntii si faah faahsan looga haqabtiray dhamaan Xaaladihii kala duwanaa eey Hogaanka Waydiiyeen.Xubnihii Shirkaas ka soo qayb Galay
Xubno Ka Tirsan Baarlamaanka Dhexe ee Gumeysiga Itoobiya oo Dhaliilay Warbixin Sanadeedkii Raíisul Wasaarahooda
Xubno ka tirsan baarlamaanka dhexe ee Itoobiya ayaa si cad u dhaliilay ugana soo horjeedsaday Warbixin-sanadeedkii Meles Zinaawi ee sanadkan uu soo hor dhigay baarlamaanka Federaalka Ethiopia.Waxaa dareenka xubnaha baarlamaanka kiciyey iyada oo aan laga warbixinin qodobo badan oo la xidhiidha hawlaha Qaranka siday sheegeen iyo iyada oo lala yaabay in xubno tiro yar oo wisii! ro qudha loo ogolaaday inay warbixin ka sii yaa baarlamaanka hawala ay u xilsaaraayeen. Waxaa kale oo xubnaha barlmaanka ka cadheysiiyay warbixinta Zinaawi oo ay ku jirtey shaqaalihii dawlada- Hoose ee Addisababa ee dhawaantan sabab la,aanta lagaga eryey shaqada iyo adeegii bulshada ay u hayeen, kuwaas oo u badnaa Dhakhaatiir iyo Macalimiin. Dhanka kale waxaa aad loogu eedeeyey kaligii taliye Zinaawi inuu maamulada heer degmo kilil iyo Qaranba uu madaxa isugaliyo si maamulku u murugsanaado.
Hayada Qaramada Midoobay ee UNDP-da oo Itoobiya Ku Tilmaantay mid ka Mida Wadamada Dunida kuwa ugu Horumar Daran.
Warbixin ay soo saartay Hayada Qaramada Midoobay u qaabilsan horumarinta Aduunka ee loo yaqaano UNDP bishii July 2003 , ayay ku sheegtey in ay Itoobiya kamid tahay lixda waddan ee ugu liita aduunka xaga horumar, katid markii baadhitaan lagu sameeyay 175 wadan oo ay Itoobiya kujirto, waxayna noqotay wadank! a 169 aad. Xeeldheereyaasha arimaha Itoobiya ayaa ku tilaamay sababaha dib u dhaca Itoobiya kukeeney in ay tahay siyaasada gumeysiga, caddaadinta shucuubta iyo maamul xumo la xidhiidha dhaqaalaha arimaha Bulshada iyo dagaalada joogtada ah ee ay kula jirto qawmiyadaha la cadaadiyo iyo waliba dalalka dariska la,ah.
Saraakiil Sare oo Ka Tirsan Ururka Talada Itoobiya Haya ee EPRDF/TPLF oo Shir Qarsoodi ah Yeeshay.
Qaar kamid ah saraakiisha ciidamada Itoobiyo iyo madax sar sare oo ka tirsan EPRDF ayaa wada yeeshey shir qarsoodi ah oo ay kaga hadlayeen siyaada Meles iyo sababaha uu u bixiyey dhul Itoobiya leedahay, Dhulkaas oo ahaa dhulbeereed hodan ku ah waxsoosarka beeraha oo uu ku wareejiyey Suudaan.. Shirkan ayaa wuxuu dhacay kadib markuu saacado uun ka sii maqanaa wadanka kaligii-taliye Meles Zinaawi oo booqasho ugu ambabaxay dalal afrikan ah. Shirkan aya la dareensanyahay in lagu diyaarinayay qorshe lid ku ah ma! amulka Meles, haseyeeshee waxaa carqalasdeeyey gacanyaraha Meles Zanaawi Samoore Yoonis oo ah talyaha ciidanka Itobiya.
Qorshaha Ciidamada Nabad Ilaalinta Soomaaliya ee Wadamada Afrika iyo Hogaamintooda
warar dheeraad ah oo ka soo baxayaan qorshaha Soomaaliya lagu keenayo ciidamo nabad ilaalineed oo ka socda dalalka Midowga Afrika ayaa la sheegay inuu dalka K/Afrika noqon doono Hogaanka Ciidamadaasi. K/Afrika oo Guddoomiye u ah Guddiga Ammaanka u qaabilsan midowga Afrika ayaa aqbashay qorshahaasi, kadib markii ay ka wada hadleen dalka Kenya, waxayna dowladda Kenya u dirtay dalkaasi wakiilkeeda Soomaaliya u qaabilsan ahna guddoomiyaha shirka dib u heshiisiinta Bathwell Kiplagat oo madaxda dalkaasi kala hadlay xaalada Soomaaliya, halka shirku marayo iyo baahida jirta. Guddiga Afrika u qaabilsan ammaanka waxaa guddoomiye ku xigeen ka ah Itoobiya, waxaana la ogyahay inay qorshaha ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya lagu keenayo ugu horeeyaan dal! alka askarta ku yaboohay oo ay kamid yihiin K/Afrika, Itoobiya iyo Kenya.
Xubno ka tirsan ergadii Dowladda KMG ah ee ka qeyb galeysay shirka dib u Heshiisiinta Soomaalida ayaa ku soo laabtay Muqdisho iyagoo ka mid ahaa taageerayaasha madaxweyne C/qaasim ee qaatay go,aanka ah inay ka baxaan shirka Kenya.
Xubnahan oo uu hogaaminayay wasiirka lacagta dowladda KMG ah Cumar Xaashi Aadan ayaa ahaa qeybtii labaad, waxaana la filayaa qeyb kale inay ku soo laabato Muqdiso isla toddobaadkan. Xubnaha labada gole ee taageersan madaxweyne C/qaasim ayuu shir uga furmayaa magaalada Muqdisho si ay go,aan uga gaadhaan xaalada DKMG-ah oo xiligeedii dhamaaday iyo wixii ay kayeeli lahaayeen
Hay,adda Cuntada adduunka ee Qaramada Midoobay ayaa ka digtay inuu raashinku ka dhammaan doono bi-sha Oktoobar Qaxooti Soomaali iyo Suudaan isugu jira oo tiradoodu gaadhayso 130.000 ruux oo ku nool Bariga iyo Galbeedka Itoobiya. Hay,addu waxay codsatay inay beesha caalamka iyo deeq bixiyeyaashu la soo gaadhaan taageera dhaqaale oo lagu sii wado quudinta Qaxootigaasi, iyagoo sheegay inay si degdeg ah ugu baahan yihiin lacag dhan 5, 300.000 oo dolarka Mareyankanka ah, oo raashin kala duwan ;loogu soo iibiyo qaxootigaasi. Qaxooti Soomaaliyeed oo dhan 3000 lana filayay inay dib ugu laabtaan Gobolada Waqooyi Galbeed ayaa la sheegay inay waxyeelo u geysan karto arrintaasi kuwaasoo u baahan in la siiyo raashin muddo ku filan iyo khidmo yar oo lacageed.
29.000 oo ah qaxooti Soomaaliyeed ayaa weli ku jira Xerooyin Qaxooti oo ku yaala Ogaadeenya, waxayna intooda badan doonayaan in dib loogu celiyo meelihii ay ka soo qaxeen oo ah Waqooyiga Soomaaliya.
Guddiga Farsamada IGAD ee gacanta ku haya shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ee ka socda dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday inuu wadahadalada la sii wadi doono madaxweynaha dowladda KMG ah C/qaasim Salaad Xasan inkastoo uu shirka ka baxay Arbacadii tegtay. Guddiga ayaa sheegay ina! y wafdi u soo diri doonaan magaalada Muqdisho si ay ugu qanciyaan madaxweyne C/qaasim inuu shirka dib ugu laabto, isla markaana ay socon doonaan xidhiidhka ay la leeyihiin, waxayna sidoo kale sheegeen in magaalada Hargeysa loo diri doono wafdi uu hogaaminayo wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Kenya Jeph Omino. Somaliland oo tan iyo markii shirka la bilaabay ka soo horjeeday inay wax lug ah ku yeelato ayaan wax rajo ah laga qabin in lagu qanciyo ka qeyb galka shirka Kenya, halka madaxweyne C/qaasim oo shuruudo ku xidhay dib ugu laa-bashadiisa shirka ay suuragal tahay in lagu guuleysto in lagu celiyo shirka.
Guddoomiyaha shirka ahna wakiilka dowladda Kenya u qaabilsan Somalia Bathwel Kiplagat oo tallaabooyin ku dhaqaaqay ayaa olole balaadhan oo aan hore loo arag qaaday wixii ka dambeeyay markii uu shirka ka baxay madaxweyne C/qaasim iyadoo dib u sixid soo bandhigid iyo qeybin lagu sameeyay Axdiga lagu muransanaa, isla markaana qodobo badan oo ka mida kuwii lagu muransanaa d! ib loo saxay. Wafdiga ayaa la filayaa inay dhamaadka toddobaadkan tagaan Hargeysa iyo Muqdisho.
Ergayga Dowlada Itoobiya u joogta shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ee Kenya ayaa dagaal diblomaasiyadeed oo balaadhan ku haya madaxweyne C/qasim Salaad Xasan wixii ka danbeeyay toddobaadkii hore markii uu ka baxay shirka Kenya. Ergeyga Itoobiya u qa-abilsan Soomaaliya C/casiis Axmed ayaa shir jaraa,id ka sheegay ereyo qalafsan oo uu ku weeraray madaxweyne C/qaasim, wuxuuna ku tilmaamay inuu C/qaasim yahay nin aan xukumin inta badan DKMG-ah, isla markaana maqnaanshihiisa aysan waxba u dhimeynin shirka. Waa shaqsi, waa iska bixi karaa. DKMG ahna shirka way joogtaa, wax saameyn ah oo uu ku yeelan karo shir-kana ma jirto ayuu yiri C/casiis Axmed, isagoo dhinaca kale beeniyay eedaha madaxwyne C/qaasim u jeediyo dowladda Itoobiya. Dhinaca kale war jawa-ab u ah hadalada ka soo yeedhay ergeyga Itoobiya ee shirka ayuu shalay so osaaray wasii-rka arrimaha dibadda Dowladda KMG ah Yuusuf! Xasan Ibraahim (Yuusuf Dheeg) oo ku eedeeyay safiirka Itoobiyaanka ah hadalada uu ku sheegay aflagaadada ee uu kula kacay madaxweynaha dowladda KMG ah, wuxuuna intaas raaciyay in madaxweynayaasha IGAD uu ka mid yahay C/qaasim Salaad oo aanay bannaaneyn in sida qof caadi ah looga hadlo ama laga soo qaado. Yuusuf Dheeg wuxuu si weyn u canbaareeyay hab dhaqanka Diblomaasiyadeed ee ergeyga Itoobiya wuxuuna si weyn u difaacay mowqifka madaxweyne C/qaasim ee shirka.
Dhagaysta yaal warkii oo aad ka dhagaysanay seen
Radio Xoriyo Codkii Shcabka Ogadenia Caawa waa naga intaa.
Radio Xoriyo, 05 Aug,2003